Kutsvaga kwemukati nekunze. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 8 | Linux Vakapindwa muropa
Kutsvaga kwemukati nekunze. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 8
Kuenderera mberi Nema blog edu ekumisikidza, isu ticha tarisa pane ita kuti zvive nyore kuti vaverengi vedu vawane zvirimo
1 RSS feed, yemukati neyekunze yekutsvaga
1.2 Injini dzekutsvaga dzemukati
1.2.3 Google Vatengi Kutsvaga
1.3 Yekutsvagisa injini
RSS feed, yemukati neyekunze yekutsvaga
Kunyangwe masocial network akakonzera tekinoroji iyi kurasikirwa nevashandisi vazhinji, ichine vateveri vayo. Chaizvoizvo iyo inokutendera iwe kuti uteedzere iwo matsva eblog pasina kuwana iyo webhusaiti.
Nokusingaperi, Jekyll inogadzira chikafu chayo uye ndokuchichengeta mune saiti midzi midzi. Asi, tinogona kushandisa sevhisi yekunze nekungotora chinongedzo mushure mechinhu nzira pasi pechiratidziro chinongedzo.
Pasi pemusoro mumwechete uyu tinogona kuwana sarudzo yekubvisa iyo yekudyisa icon kubva kune ese musoro uye pasi peji. Tichafanira kungochinja kubva kunhema kuenda kuchokwadi makavanda.
Injini dzekutsvaga dzemukati
Kana tichitaura nezveinjini dzekutsvaga isu tiri kureva kwete kungo tsvaga mukati mesaiti asiwo kune yedu saiti inoonekwa mune dzekutsvaga injini.
Kubvumira kutsvaga mukati mewebsite, isu tinoshandura kodhi yacho mu config.yml seinotevera.
Tinogona kusarudza pakati pesarudzo nhatu dzekutsvaga
Google Tsvaga Kutsvaga.
Ndiyo sarudzo inoitwa nekusarudzika uye haidi chero gadziridzo.
Algolia inesimba injini yekutsvaga kupfuura Lunr. Iyo ine yemahara chirongwa uye maviri ekubhadhara sarudzo. Kuti uishandise, iwe unofanirwa kugadzirisa mune imwe faira iyo yatichataura nezvayo mune inotevera chinyorwa.
Iyo data yatinofanirwa kuzadza mu config.yml ndeiyi inotevera:
Uye inotevera data yatinowana kana tichinyoresa pane saiti
application_id: # Iyo ID yekushandisa yakapihwa nebasa
index_name: # Zita re index yekutsvaga
search_only_api_key: # Iyo yakapihwa API KEY
Isu zvakare tine sarudzo yekuratidza vaverengi ndeipi injini yekutsvaga yatiri kushandisa.
powered_by: # true (default), manyepo
Rangarira kubvisa iyo nhamba.
Isu tinotanga kunongedza ne:
ALGOLIA_API_KEY = yako_admin_api_key bundle exec jekyll algoli
Google Vatengi Kutsvaga
Kuti tishandise Google seinjini yedu yekutsvaga tinofanirwa kuita zvinotevera;
Isu tinoenda kune ino peji uye tinya paNew yekutsvaga injini.
Isu tinozadza muzita resaiti uye sarudza mutauro. Dzvanya paGadzira.
Iyo inotiratidza iyo data reinjini yekutsvaga, makopi uye unamate iyo id mune faira kuti ive nayo padyo.
Dzvanya pane Kudzora Panel.
MuKutarisa uye tinonzwa isu tinosarudza Mhedzisiro chete sekumisikidzwa uye Minimalist sedingindira.
Tinopedzisa nekudzvanya Sevha ndokuwana kodhi.
Isu tinonama iyo id muchikamu chinotevera che config.yml
search_engine_id: Isa id injini yekutsvaga pano
Iwe unogona zvakare kumisikidza iyo yekukurumidza yekutsvaga sarudzo nekumisikidza iyo instant_search paramende kune yechokwadi.
Panguva ino mumutambo, isu tese tinoziva kuti nzira yakanakisa yekuwana yakanaka injini dzekutsvaga nzvimbo ndeyokubhadhara kushambadzira. Asi, kana nekuda kwezvikonzero zvebhajeti izvo zviri kunze kwemubvunzo, tinogona kutevera mamwe matipi ekuvandudza yedu saiti mune ita kuti vawedzere kutsvaga injini. Imwe yenzira ndedze kuratidza kuti isu tine basa.
Kuongorora ndiyo nzira yekuvimbisa kutsvaga injini kuti isu tine mvumo yekuona iyo data inogadzirwa kubva mukutsvaga kunotungamira kune yedu saiti.
Iyi nhanho inofanirwa kuitwa kana iwe uchizo isa saiti kune server nekuti zvinofanirwa kuti yega yega injini yekutsvaga iite maitiro ekuongorora.
Mune mamwe mazwi, iwe uchafanirwa kunge uine zvimwe zvinyorwa zvakanyorwa usati wapedza ichi chikamu cheiyo config.yml faira. Tichaona izvi muzvinyorwa zvinotevera.
Zvishoma Zvikanganiso, dingindira ratiri kushanda naro, rinoenderana neinotevera injini dzekutsvaga.
Kuongorora kunogona kuitirwa zvese domeini uye imwe kero. Muchiitiko chekutanga chinodiwa kuti ukwanise kugadzirisa iyo DNS kumisikidzwa, asi pakadai hapana chikonzero chekuchinja mu config.yml. Imwe sarudzo iri mu URL Prefix sarudza HTML Tag sarudzo
Tichaona chidimbu chekodhi. Isu tinongofarira nhevedzano yetsamba nenhamba dziri mushure mezviri mukati. Isu tinoteedzera ivo pakati pemakotesheni mu
Bing inopawo sarudzo yekugadzirisa DNS uye inowedzera sarudzo yekuisa mepu kubva kuGoogle Search Console, kana chimwe chatinofanira kubata config.yml. Kunze kwekuti sarudzo inonzi HTML Meta Tag, maitiro acho akafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kutsvaga kwemukati nekunze. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 8